Free online ọrụ. Ngụkọta oge nke steepụ na rotary nkebi 180
Ngụkọta oge nke steepụ na a 180 ogo swivel na tilt nkebi
The obosara nke steepụ E
Number nke rotary nkebi CP 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Number nke iji mbịne P 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Ngụkọta oge nke steepụ na a adiana nke 180° na rotary nkebi
CP - Number nke rotary nkebi
P - ọnụ ọgụgụ nke nzọụkwụ na ala bowstring
C - Ọnụ ọgụgụ nke nzọụkwụ
Ke akpa itie, elu ogbo a odude n'ala larịị nke abụọ n'ala.
Na nke abụọ ahụ, n'ala nke abụọ nke ụlọ bụ nke ikpeazụ nzọụkwụ. The elu nke n'ọkwá na-ebelata proportionally
Na a iche iche na ọnụ ọgụgụ na-egosi na akụkụ maka rotary nkebi.
N'ihi na nhọrọ nke ezigbo mma steepụ ịgbanwe ọnụ ọgụgụ nke nkebi.
Ị nwere ike igbanye a nwa na-acha ọcha ma ọ agba ịbịaru.